Shabaab Zako ma la siin karaa?-DHAGEYSO | Radio Muqdisho
Shabaab Zako ma la siin karaa?-DHAGEYSO
Published on January 15, 2013 by Admin 2 · 3 Comments · 3,896 views
Kaddib markii ay ku jabeen dagaalladii ay galeen, ayna gacantooda ka baxeen gobolladii iyo goobihii ballaarnaa ee ay xoogga ku heysteen, burcadda Alshabaab, gabbalka ayaa meel xun kaga dhacay.
Waxay bilaabeen inay boob iyo dhac u geystaan hantida dadka, sidiiba ay markii hore sameyn jireen.
Horjoogayaasha kooxda Shabaab ayaa ka roonaan waayay in ay farriimo maqal ah soo duubaan,iyagoo ku calaacalaya Shacabka Soomaaliyeed kana codsanaya inay taageero maaliyadeed siiyaan Alshabaab, si ay ugu sii wadaan waxa ay ugu yeereen Jihaadka, oo dhabtii ah fidno ah oo ay ugu gol leeyihiin in ay shacabka Soomaaliyeed nolosha ugu diidaan.
Haddaba Shareecada Islaamku maxay ka qabtaa in koox qowleysato oo dadka gumaada la siiyo taageero dhaqaale.
Dambi intee la eg ayaa ka soo gaaraya qofkii hantidiisa ku bixiya dagaalka ay wadaan burcadda Alshabaab?
Waa Mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Tubta Toosan, waxaana marti noogu ah Sheikh Muuse Cagaweyne.
mahmed gadid says:	January 20, 2013 at 7:47 pm	ma istaahilaan zako kumana kacdo zako waana umad aan fahamsaneyn diinta oo aan heeysan aqoon innaba halekaatee kaliya waxeey kabarteen in aay wax ku qalaan
Reply »	Dahir Mohamed says:	January 23, 2013 at 11:11 am	Aniga waxay ila tahay maya, waayo waxaanu ognahay jihaadka benta ah iyo sideey umada ugu dhibaateeyeen, marka yey u sheegayaan oo ka dhegeysanaya beentaa qaawan.waxaana ila tahay qof dambe oo jihaad lagu khaldayaa in aanu jirin….
Reply »	Shardi says:	February 5, 2013 at 10:16 pm	Kumabaxdo zako munafaqiinta